ပibိဇီဝဆေး - Guangzhou Hongwu Material Technology Co. , Ltd.
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာမှုတို့ကြောင့်လူများ၏ပantibိဇီဝပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များဝယ်လိုအားမှာဆက်လက်မြင့်တက်လာမည်။ လူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ လူနေမှုနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တိုးတက်စေရန်၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောပacterိဇီဝဆေးများဖြင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိသော၊ အဆိပ်အတောက်နိမ့်ခြင်း၊ အရသာမရှိ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်၊ လုံခြုံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစသည်တို့တို့၏ထူးခြားချက်များရှိပြီးပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်သော antibacterial agent ဖြစ်လာသည်။
မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ကွမ်တန်အရွယ်အစားအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် macroscopic ကွမ်တမ်ဥမင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အသုံးချတန်ဖိုးသည်စူပါလျှပ်ကူးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံစွမ်းအား၊ ပantibိဇီဝဆေးနှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သော Escherichia coli နှင့် Staphylococcus aureus တို့ကိုပြင်ဆင်ထားသော nano-silver colloid ၏ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများကိုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ Hongwu Nano မှထုတ်လုပ်သည့် nano silver colloid သည် Gram-negative ဘက်တီးရီးယားများ၊ Gram-positive ဘက်တီးရီးယားများနှင့်မှိုများကိုကောင်းမွန်သော antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများတာရှည်ခံဖြစ်ကြသည်။
nano silver colloid ကိုအဓိကအသုံးပြုခြင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဆေးပညာ - တစ်သျှူးများကိုပacterိဇီဝဆေးနှင့်ရောဂါကူးစက်မှု၊
အီလက်ထရွန်းနစ် - ကူးစက်နိုင်သောအဖုံး၊ လျှပ်ကူးမှင်၊
နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ - anti-static၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကပ်ခြင်း၊
ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ: လောင်စာဆဲလ်ဓာတ်ကူပစ္စည်း, ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်း;
အပူဖလှယ်ပစ္စည်းများ; အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများ electroplating ။
ကျန်းမာသောလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်သည်လူတို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်သောသဘာဝဇီ ၀ သက်ရှိများသည်လူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်
လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအမြဲကာကွယ်ပေးဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အတူ nano antibacterial ပစ္စည်းများလေကိုသန့်စင်ခြင်း၊
အသုံးအများဆုံး nano antibacterial ပစ္စည်းများအချို့၏အမျိုးအစားခွဲခြား
1. သတ္တု nano antibacterial ပစ္စည်း
a.Sver nanoparticles (အမှုန့်ပုံစံဖြင့်)
b.Sver nanoparticles dispersion (အရည်ပုံစံဖြင့်)
ဂ။ အရောင်ဖျော့ဖျော့ nano silver dispersion (အရည်ပုံစံဖြင့်)
2.Metal အောက်ဆိုဒ် nano antibacterial ပစ္စည်း
a.ZnO သွပ်အောက်ဆိုဒ် nanoparticles
ခ။ CuO ကြေးနီအောက်ဆိုဒ်အမှုန်
ဂ။ Cu2O Cupous အောက်ဆိုဒ် nanoparticles
။ TiO2 တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် nanoparticles (photocatalysis)
3.Core-shell ကို nanoparticles
nano antibacterial ပစ္စည်းများလျှောက်လွှာ
1. Nano antibacterial အပေါ်ယံပိုင်း
အဆိုပါ antibacterial နှင့်အနာဒဏ်ခံအပေါ်ယံပိုင်း, လေသန့်စင်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် antifouling Self- သန့်ရှင်းရေးအပေါ်ယံပိုင်းအပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော nano antibacterial ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီးထူးခြားသောသန့်စင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
2. Nano antibacterial ပလပ်စတစ်
ပantibိဇီဝပစ္စည်းများကိုသေးငယ်သောပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်ပလပ်စတစ်ကိုရေရှည်ပantibိဇီဝဆေးနှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုပေးနိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်ပantibိဇီဝဆေးပစ္စည်း ၁% ၏ပမာဏသည်ပလပ်စတစ်တွင်ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပsuppliesိဇီဝဆေးပလပ်စတစ်များအသုံးပြုခြင်းတွင်အစားအစာပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ၊ ကစားစရာများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
3. Nano antibacterial အမျှင်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖိုင်ဘာသည်သေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများကိုစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့်၊ အပူချိန်သင့်လျော်ပါက၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောများပြားလာပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. Nano antibacterial ကြွေထည်
nano antibacterial ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းများ၏ antibacterial မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
5. Nano antibacterial ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ
မျက်မှောက်ခေတ်အဆောက်အအုံများတွင်ကောင်းမွန်သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှု၊ လုံလောက်မှုမရှိသောအပူကာကွယ်မှုနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးနံရံများမှာရေစို။ စိုစွတ်နိုင်သည်။
မှိုနှင့်အခြားသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ။ ပantibိဇီဝဆေးများတည်ဆောက်ခြင်းပစ္စည်းများ၊ ပantibိဇီဝဆေးများနှင့်ပacterိဇီဝဆေးသုတ်ဆေးများသည်ပရိဘောဂမျက်နှာပြင်များရှိဘက်တီးရီးယားများ၏ရှင်သန်နှုန်းကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်။